အကောင်းဆုံး Binary Option ကိုပွဲစားများစာရင်း 2019 | Binary Option ကိုပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ရန် - က ISO
binary Option ကိုပွဲစား
အကောင်းဆုံးဒီဂျစ်တယ် / Binary Option ပွဲစားများ 2020 - Top5
မတ်လ 21, 2018
binary Option ကိုပွဲစား binary option ကိုလမ်းပြသော
အွန်လိုင်း binary နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ရွေးချယ်မှုကုန်သည်များကမှန်ကန်တဲ့ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်အောင်မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးပွားစေရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်အရေးကြီးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသဘောတူကြသည်။
ဤရွေ့ကားအခြားသူတွေအကြားကမ်းလှမ်းမှုနှင့်နိမ့်ဆုံးကုန်သွယ်ပမာဏအပေါ်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များလက်ခံခဲ့သည်, သူတို့ကအပြည့်အဝစညျးမဉျြးစညျးကမျးင်ရှိမရှိနဲ့တူသောအရာတို့ကိုမစဉ်းစား, ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာများပါဝင်သည်။
သို့သော်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုတဦးတည်းကိုရှာဖွေပွဲစားများများစွာမှတဆင့် sifting အွန်လိုင်းသုတေသန၏ရက်ပေါင်းများစွာလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဤအချိန်ပေါ်ခုတ်လှဲခွင့်ပြုပါရန်, ငါတို့ကဒီအသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်ကိုဖန်တီးပါတယ်။
ယနေ့အွန်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသောအကောင်းဆုံး binary နှင့် digital options ပွဲစား ၁၀ ယောက်။
binary options များကုန်သွယ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
ထောက်ခံမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအဆင့်များ - ၎င်းတို့ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်
မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုအကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်
ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် Tradable ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ
သူတို့တစ်တွေ binary options များသရုပ်ပြအကောင့်ဟုတ်မဟုတ်
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပြီးနောက်, သင်အကောင်းဆုံး binary options များကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံသောတဦးတည်းနှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းပွဲစားတစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောသုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ရှုဖို့တိကျတဲ့ပွဲစားကို click နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာဒွိ options များဈေးကွက်ထဲမှာသစ်ကိုတွေဟာလည်းတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ 2014 အတွက်ဖြန့်ချိ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးရုရှားနိုင်ငံသည်၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိတယ်။
ဤသည်မှာရှေးခယျြစရာပွဲစားဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များဆက်ဆံရေးဆုံးဖြတ်ချက်စင်တာ (FMRRC) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သူတို့ကအစနိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် (FinaCom) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါပဲ။
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူစတင်အသုံးပြုခြင်းအကျိုးဆောင် RUB 10,000 ကို virtual ငွေသားနဲ့သရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်ကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့လွယ်ကူပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစားအီလက်ထရောနစ်ငွေလွှဲခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် Skrill တူသော eWallets ကနေတဆင့်လုပ်ငွေပေးချေမှုလက်ခံ။
သင်ဤပွဲစား join ဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်ဟာ Standard အကောင့်များနှင့်တစ်ဦး VIP အကောင့်များအကြားရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ က Standard အကောင့်, သင်သာ $ 10 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်အောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ် VIP Account အများအတွက်, သငျသညျကိုအနည်းဆုံး $ 2000 လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နိုင်ပါတယ်နိမ့်ဆုံး $ 1 သည်နှင့်သင်% 90 မှတက်၏ထိရောက်သောပြန်လာဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကုန်သွယ်ရေးနေသမျှကာလပတ်လုံး 1 နာရီနှင့်ဆုံးရှုံးအရောင်းအဆုံးရှုံးမှု minimize လုပ်ဖို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုထွက်သွားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အဘို့ကို run နိုင်ပါတယ်။ tradable ပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏စာရင်းကို 20 အောက်မှာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ယူအစာရှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၌နှင့်များသောအားဖြင့်5ရက်အတွင်းသင့်အကောင့်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း, ထိုင်း, ဘရာဇီး, အင်ဒိုနီးရှားနှင့်တူရကီ: လောလောဆယ်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအောက်ပါနိုင်ငံများတွင်အများဆုံးရေပန်းစားသည်။
ကျနော်တို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေအတွက်ထိပ် binary options များပွဲစားများတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီစဉ်းစားပါ။ တဦးတည်းကိုသူတို့အပြည့်အဝ CySEC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့နိုင်ငံအများအပြားကနေကုန်သည်များက၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
IQ Option 2013 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ပွဲစားရဲ့ပလက်ဖောင်းကောင်းကောင်းဒီဇိုင်းပြုလုပ်နဲ့ browser သို့မဟုတ်အက်ပ်မှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှာလည်းကွဲပြားခြားနားသောဇယား, အညွှန်းကိန်းများနှင့်အခြားကုန်သည်ဖော်ရွေ features တွေများစွာပါဝင်သည်။
သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မှတ်တစ်ခုမှာကုန်သွယ်မှုနှုန်းရရှိခဲ့ပြီးမြင့်ထိရောက်သောပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်အောင်မြင်သောအရောင်းအပေါ်% 95 အထိဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ ဒီပွဲစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အေးမြသောအရာသည်သင်တို့ထံကရှေးခယျြနိုငျသန်း 10 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြစ်ပါသည်။
သင်သည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းစမ်းရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်အမှန်တကယ်အကောင့်မှထွက်မကြိုးစားမီတစ် binary options များသရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ အဆိုပါသရုပ်ပြအကောင့် $ 10000 ကို virtual ငွေသားနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်။
တကယ့်အကောင့်ဖွင့်လှစ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 10 လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့သိုက်အောင် အီလက်ထရောနစ်ငွေလွှဲခရက်ဒစ် / debit ကဒ် Skrill နှင့်အခြား eWallets မှတဆင့်။
ထုတ်ယူသောဤငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များမှတဆင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ယူတောင်းဆိုမှုကို 24 နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။
IQ option နီးပါးတိုင်းနိုင်ငံသားပေမယ်ရှိရာနိုင်ငံများတွင်အချို့လက်ခံ IQ Option လူကြိုက်အများဆုံးရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း, အီတလီ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီးနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အပြည့်အဝတစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အခွင့်အာဏာအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေလျှင်ပွဲစား legit ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်သောအခါငါကြည့်ရှုသော့ကိုအင်္ဂါရပ်များပါတကား။ ကျွန်မဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, Binomo အဆိုပါ IFMRRC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ငါများသောအားဖြင့် CySEC, ASIC နှင့် FCA တူသောဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လက်မှတ်များကိုင်တဲ့သူပွဲစားများမှ preference ကိုထားပါ။
ဒီအွန်လိုင်းပွဲစား $ 1000 နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုနေတဲ့သရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကပလက်ဖောင်းတစ်ခုခံစားရနိုင်ရန်အတွက်စတင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်သာတစ်ဦးသရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်ရန်ခိုင်လုံသောအီးမေးလ်အကောင့်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်အပြင်, သင်အလွယ်တကူသရုပ်ပြအကောင့်ရန်ပုံငွေများ replenish နိုင်ပါတယ်။
Binomo ကနေရှေးခယျြဖို့ tradable ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ ဤရွေ့ကားငွေကြေးအားလုံး, ကုန်စည်, စတော့ရှယ်ယာနှင့်အ cryptocurrencies ပါဝင်သည်။ သငျသညျအဓိကအားသုံးခွင့်ရှိသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်သင် VIP အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူဟာအကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းနှင့်အတူအဘို့အ sign up ကိုအကောင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။
အမှန်တကယ်ငွေသားစာရင်းဖွင့်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ပွဲစားသည်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ အကြွေးဝယ်ကတ်၊
ရွေးချယ်နိုင်သောအကောင့်အမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိပါသည်။ Standard အကောင့်သည် $3ထက် ပို၍ မထည့်ဘဲပလက်ဖောင်းကိုစမ်းသပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ အကောင့်တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ သို့သော်၊ Gold နှင့် VIP အကောင့်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောငွေထုတ်ယူမှုများအပါအ ၀ င်ထပ်မံပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်
ယေဘုယျအားဖြင့် ၄.၅ ကြယ်ပွင့်ပွဲစားတစ် ဦး၊ စာရင်းထဲတွင် ၃ နေရာကောင်းဖြစ်သည်။
ဤအစညျးမဉျြးစညျးကမျး binary options များပွဲစားများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သစ်ကိုတွေဟာလည်းတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ExpertOption 2015 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များစည်းမျဉ်းစင်တာ (FMRRC) နှင့်ဗာနူအာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (VFSC) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
ExpertOption အဆိုပါပွဲစားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြု powered ရဲ့ခေတ်မီကောင်းစွာဒီဇိုင်းပလက်ဖောင်းပေးထားပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးကို web browser သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း app ကနေတဆင့်အတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တစ်ခုကိုပွဲစားဖြစ်ခြင်း, သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းအတော်လေးပဲလက်ရှိ (ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်
) 100 ကျော်။
သို့သော်စာရင်းအများအပြားကုန်သည်များဆွဲဆောင်မှုရှာတွေ့ထားတဲ့ cryptocurrencies ပါဝင်သည်။
သငျသညျ $ 10000 ကို virtual ငွေသားနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုလာရာ၎င်းတို့၏သရုပ်ပြအကောင့်ကို အသုံးပြု. ExpertOption platform ပေါ်တွင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်။
တကယ့်ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်, သငျသညျ $ 50 နှင့် $ 5000 အကြားဘယ်နေရာမှာမဆိုငွေသွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးချင်းစီအများအပြားကုန်သည်ဖော်ရွေ features တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့5ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်မျိုးရှိပါတယ်။ တိုင်း account အသစ်ကိုအတော်လေးအရပ်မြင့်သောအထိ 125% တစ်ဆုကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ ExpertOption ပလက်ဖောင်းအီလက်ထရောနစ်ငွေလွှဲခရက်ဒစ်ကတ်များ Skrill နှင့် WebMoney အပါအဝင် 20 ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များကျော်လက်ခံခဲ့သည်။
သင့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. သင်သည် $ 1 သကဲ့သို့နည်းနည်းနှင့် $ 5000 သကဲ့သို့မြင့်မားနှင့်အတူတစ်ဦးအနေအထားရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုဖွင့်ဖို့ 96% ၏ထိရောက်သောပြန်လာဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီပွဲစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တူသောသူတဦးအင်္ဂါရပ်မြန်ဆန်စွာထုတ်ယူလုပ်ငန်းများ၌မည်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. သင်ကဲ့သို့နည်းနည်း 48 အဖြစ်နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်လည်း $ 10 သကဲ့သို့အနည်းငယ်သာထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
လောလောဆယ် ExpertOption အိန္ဒိယ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, တောင်အာဖရိက, အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှကုန်သည်များကရေပန်းစားသည်။
အကောင်းဆုံးကို binary options များပလက်ဖောင်းရှာဖွေခြင်းသင်ပွဲစားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုသုတေသနနှင့်သူတို့တွင်နှိုင်းယှဉ်လိုအပ်သည်။ စဉ်းစားရန်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအချက်များရှိပါသည်။
ဒါဟာသုတေသနလုပ်နေတာအသုံးစရိတ်ရက်ပေါင်းဆိုလိုနိုင်ဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုကောင်းကုန်သွယ်ဖြုန်းနှင့်အမှုနဲ့ချင်ပါတယ်အချိန်ပါပဲ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤ binary options များအကျိုးဆောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆောင်းပါး created ဒါကြောင့်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်တှငျကြှနျုပျတို့ယနေ့အွန်လိုင်း operating ထိပ်ပွဲစားများကြည့်ရှုပါတယ်။ မျှော်လင့်, သင်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
support and resistance လို့ခေါ်တဲ့ level တွေကအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
Tags: အကောင်းဆုံး binary option ကိုပွဲစားများ, ဒွိ option ကိုပွဲစားများ, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးသိုက်နှင့်အတူ binary option ကိုပွဲစားများ, cftc စညျးမဉျြးစညျးကမျး binary option ကိုပွဲစားများ, ဘယ်လို binary option ကိုပွဲစားငွေရှာကြဘူး, ဥပဒေရေးရာ binary option ကိုပွဲစားများ, တရားဝင် binary option ကိုပွဲစားများ, အကောင်းဆုံး binary option ကိုပွဲစားများ၏စာရင်း, ဒွိ option ကိုပွဲစားများ၏စာရင်း, စညျးမဉျြးစညျးကမျး binary option ကိုပွဲစားများ၏စာရင်း, စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် binary option ကိုပွဲစားများ, ဒွိ option ကိုပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ထိပ်တန်း 10 binary option ကိုပွဲစားများ, ထိပ်တန်း binary option ကိုပွဲစားများ, အကောင်းဆုံးကို binary option ကိုပွဲစားဘာတွေလုပ်နေလဲ